Ngaba kunokwenzeka ukulandelela yonke i-backlinks yakho ngeGoogle?
Njengoko uqeqesho lubonisa, iiwebhsayithi ezigqibileyo ukuqesha abanye abacebisi abangenabasebenzi be-SEO okanye i-arhente engaziwayo yokulungiswa kwamanye amazwe, ngokuqhelekileyo iphelela nge-dropings yabo ye-rankings kunye nezohlwayo ze-Google. I-webmasters abangenalwazi abanamathemba abathemba abathengi ngokukhawuleza ukukhula kunye nokwakha izixhumanisi ngokusebenzisa iindlela zobuchwephesha.
Esi sithuba sinikezelwa ekuphuculweni kokusasazwa kwendawo esinikezelwa ngokufanelekileyo kwaye engenzi nzuzo kwaye indima ye-backlink kule nkqubo. Ngaphezu koko, siza kuxubusha indlela i-backlink engalunganga inokuchaphazela ngayo isikhundla sakho sewebhu kunye nodumo.
Ndingayifumana njani i-backlink?
Ngaba uke wazibuza ukuba i-backlink ezimbi zihluke njani ezilungileyo? Impendulo echanekileyo yalo mbuzo ibonisa umgangatho wewebhusayithi abaya kuyo. I-backlink ephezulu yezinga eliphezulu ifunyanwa kalula. Nangona kunjalo, ngamanye amaxesha kufuneka uqhube uphando lwewebhusayithi ukuqonda ukuba kutheni i-backlink ichaphazela kakubi indawo yakho ye-SEO.
Kukho iindlela ezithile onokukwazi ukwahlula phakathi kobugcisa obuphezulu kunye neempembelelo ezingekho emgangathweni:
Izixhumanisi ezisuka kumthombo wewebhu oqale ukuvelisa i-backlinks
) Xa izithuba ezibekwe kwiwebhusayithi zizwakala zingenakunqandwa kwaye zingenakho idatha yocwaningo, umthombo onjalo wewebhu ungasebenza kuphela ukudibanisa ezinye iiwebhusayithi. Ukuba i-website ifakwa kwi-WordPress yolawulo lwenkqutyana kwaye isebenzise umxholo ongezantsi we-TwentyEleven, ingaba ngumqondiso we-site esemgangathweni, esemgangathweni, eyadalwa ngenjongo yokupompa imali yakho.
Iziqhagamshelo ezivela kumanye amawebhusayithi
Mhlawumbi uphawule le fomu yokwakha ikhonkco kwiiblogi. Iinkqubo ezenza ngokuzenzekelayo i-backlink zisebenzisa i-bots ukuze zibeke ezinye iingubo zewebhusayithi. Ezi mpendulo zijonge ngokubonakalayo ngokwemvelo kuba iinkqubo ezizenzekelayo ziba yingqiqo kwiintsuku zethu. Iimpendulo ezigaxekile zingabomntu kwaye zibandakanya igama lomlobi. Ikhonkco ze-spam zikwazi ukuzisa ixabiso kwiprofayili yakho yekhonkco.
ii-Linkins ezizungezwe ngomgangatho ophantsi, iibhalo eziphindiweyo
Ngokuqhelekileyo, imithombo yewebhu eyenziwa ngenjongo yokuvelisa isiqulatho inomxholo ongenanto ingqiqo okanye khuphela nje ukukopisha kwiiwebhusayithi. Amanye amashishini wokwakha amaqumrhu oqhelanisiweyo athile ngokukhawuleza aphuhlise iisayithi nganye kwisifundo sokwakha unxibelelwano kubo kwaye adlulise iifowuni ezifumanekayo njengoko zifanelekileyo. Ininzi iGoogle iya kuyifumana kwithuba elincinci kwaye ihlasele imithombo yewebhu kunye nezohlwayo. Ngenxa yoko, uya kufumana enye i-backlink ephezulu ye-site yakho.
njani ukulandelela i-backlink yakho ephezulu?
Kwinqanaba elidlulileyo, sixoxile indlela yokuhlukanisa i-backlinks esemgangathweni. Ngoku, lixesha lokuqwalasela indlela yokukhubaza ezi ngqungquthela ezimbi ukuze ugweme i-rankings drop and Google penalties.
Indlela elula kakhulu ukuqhagamshelana nomnini wewebhusayithi apho ikhonkco elungileyo lifakwe khona kwaye licele ukuba lisuse. Uninzi ukuba uya kujongana ne-webmasters ekucela ukuba uhlawule ukukhutshwa kwekhonkco. Kule meko, inketho eyona nto iya kuba yilapho idibanisa izixhumanisi ezingafunekiyo kunye nesixhobo se-Google Link Disavow Isixhobo ukuba asikwazi ukususwa ngesandla Source .